RawTherapee 5.8 dia miaraka amin'ny fanohanan'ny RAW amin'ny endrika CR3 ary bebe kokoa | Avy amin'ny Linux
RawTherapee 5.8 tonga miaraka amin'ny fanohanan'ny RAW amin'ny endrika CR3 sy maro hafa
Herinandro vitsivitsy lasa izay nambara ny famoahana ny kinova RawTherapee 5.8 vaovao, kinova izay miaraka amin'ny vaovao kely, fa ny iray amin'izy ireo dia heverina ho zava-dehibe amin'ny fampiharana satria ny RawTherapee 5.8 dia misy ny fanohanana voalohany ny sary RAW amin'ny endrika CR3 ampiasaina amin'ny fakan-tsary Canon, ary koa ny fanovana fanampiny.
Ho an'ireo izay mbola tsy mahalala ny RawTherapee dia tokony hahafantatra fa fampiharana izany manome andiana fitaovana hanitsiana ny fiterahana loko, manitsy ny fifandanjana fotsy, ny famirapiratana ary ny fifanoherana, ary koa ny fampivoarana ny sary ary ny fihenan'ny tabataba.
1 Momba ny RawTherapee
2 Inona no vaovao ao amin'ny RawTherapee 5.8?
3 Ahoana ny fametrahana ny kinova RawTherapee 5.8 vaovao ao Liux?
Momba ny RawTherapee
RawTherapee misongadina fa afaka manana ny fanohanana hahafahana manohana endrika fisie RAW marobe, ao anatin'izany ny fakantsary misy sensor Foveon sy X-Trans, ary afaka miasa miaraka amin'ny fenitra Adobe DNG sy miaraka amin'ny endrika JPEG, PNG ary TIFF (hatramin'ny 32 bit isaky ny fantsona).
Ary koa ny fampiharana mampihatra algorithman isan-karazany hanamorana ny kalitaon'ny sary, amboary ny jiro, esory ny tabataba, manatsara ny antsipiriany, miady amin'ny aloka tsy ilaina, manitsy ny sisiny sy ny fomba fijery, esory ho azy ny pixel vaky ary ovao ny fivoahana, ampitomboy ny hamafin'izay, esory ny gorodona sy ny vovoka
RawTherapee dia miorina amin'ny foto-kevitry ny fanovana tsy manimba, mitovy amin'ny programa fanodinana RAW sasany.
Ny fanitsiana marina ny sary dia ampiharina mandritra ny fizotry ny fanondranana. RawTherapee dia afaka miasa miaraka amin'ireo rakitra RAW avy amin'ny fakantsary nomerika, ary miaraka amin'ireo sary amin'ny endrika mahazatra. Ny kaodin'ny tetikasa dia voasoratra ao amin'ny C ++ mampiasa GTK + ary zaraina ambanin'ny lisansa GPLv3.
Inona no vaovao ao amin'ny RawTherapee 5.8?
Ao amin'ity kinova vaovao ity miavaka ny fampidirana ilay fitaovana vaovao «Capture Sharpening», de mamela anao hamerina ho azy ireo antsipirihany very noho ny blur lens (diffraction). Fisamborana maranitra miaraka amin'ny Post-Resize Sharpening dia mamela valiny amin'ny antsipiriany sy maranitra.
Zava-baovao iray hafa miavaka amin'ity kinova vaovao ity ny fampidirana ny fanohanana voalohany ny sary RAW amin'ny endrika CR3 ampiasaina amin'ny fakan-tsary Canon. Hatramin'izao dia azo atao ny mamoaka sary amin'ny fisie CR3, ary ny metadata dia tsy mbola tohanana, saingy antenaina fa ny fanatsarana farany dia hanatsara an'io fampiasa io amin'ny fampiharana.
ihany koa Ny fanamafisana ny fanohanana ireo maodely fakantsary isan-karazany dia misongadina, ao anatin'izany ny fakan-tsary misy mombamomba ny loko DCP misy loharano maivana roa sy haavon'ny fotsy, ankoatry ny fanatsarana ny fahombiazan'ny fitaovana isan-karazany.
Farany dia voalaza fa ao amin'ity kinova vaovao ity ny rohy miaraka amin'ny libtcmalloc.so izay miaraka amin'ireo fitaovana Google hamahana olana izay tsy hamerenan'ny glibc ny fahatsiarovan-tena amin'ny rafitra fiasa.
Ahoana ny fametrahana ny kinova RawTherapee 5.8 vaovao ao Liux?
Ho an'ireo liana amin'ny fahazoana mahazo an'ity kinova RawTherapee 5.8 vaovao ity azonao atao ny mahazo an'io kinova vaovao io amin'ny alàlan'ny fitsidihana ny tranonkalany ofisialy izay ahitanao ireo mpiorina samihafa amin'ilay rindranasa (Windows, Mac ary Linux).
Ka ho an'ny tranga "Linux" Azontsika atao ny mahazo an'ity kinova vaovao ity amin'ny alàlan'ny fisintomana ny AppImage azy.
Izany dia azo atao amin'ny alàlan'ny fanokafana terminal ary eo am-panaovana ity baiko manaraka ity:
Vita ny fisintomana izao dia tsy maintsy manome alalana fanatanterahana azy isika amin'ny:
Ary azon'izy ireo atao ny mampandeha ilay rindranasa amin'ny alàlan'ny fanindriana indroa amin'ny rakitra na avy amin'ny terminal miaraka amin'ny:
Amin'ny tranga misy an'ireo mpampiasa Ubuntu sy derivatives, azon'izy ireo atao ny misafidy ny manampy tahiry ao amin'ny rafitr'izy ireo ary tsy hahazo ny kinova farany navoaka ihany izy ireo fa hampahafantatra azy ireo momba ireo fanavaozana vaovao ihany koa.
Mba hanampiana ny tahiry, manokatra terminal fotsiny ary ao anatiny dia tokony soraty ity baiko manaraka ity:
Ary farany, nametraka ilay rindranasa fotsiny izy ireo tamin'ny fampiharana ity baiko manaraka ity:
Raha ireo mpampiasa Arch Linux, Manjaro, Arco na fizarana hafa mifototra amin'ny Arch Linux, ny fametrahana an'ity rindranasa ity dia azo atao amin'ny fanoratana ity baiko manaraka ity:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » RawTherapee 5.8 tonga miaraka amin'ny fanohanan'ny RAW amin'ny endrika CR3 sy maro hafa
eXtern OS: Ny Distro hiaina ny hoavin'ny GNU / Linux